Accueil > Gazetin'ny nosy > Jeneraly Fidy: Tsy miaramila vatatay akory ny mpanao gazety
Jeneraly Fidy: Tsy miaramila vatatay akory ny mpanao gazety
Tsy ny fanambaran’ny Jeneraly misotro ronono sy ny Manamboninahitra ambony no asianay fanakianana fa ny fomba nataon’ny jeneraly Fidy kosa.
Marina fa Jeneraly manana ny toerana nisy anao ianao teo amin’ny raharaha ny 2001 sy 2002 rehefa nisy ny fanonganam-panjakana nataon’ingahy Ravalomanana Marc tamin’iny fotoana iny, ary afaka nibaiko izay tiana hanaovana ny zana-dambo sy ny olona teo ambany fibaikoanao tamin’izany fotoana izany. Fony ianao mbola amperinasa koa dia azonao natao izay nataonao tamin’ny miaramila nofehezinao. Tsy izany Jeneraly izany ny mpanao gazety. Aoka hazava fa tsy kaporaly na sergent, na miaramila vatatay ny mpanao gazety ka hotapahinao ny lohany araka ny voalazanao omaly tao amin’i La Rotonde iny ka hampihorohoroanao toa ireny. Aoka mba samy hifanaja isika fa samy manana ny asany ka tsy ianao indray no hibaiko anay amin’ny asanay sy hampianatra anay amin’izany. Izay fomba fijerinao dia lazao fa ny mpanao gazety tsy hampianarina sy hohorohoroanao toa ireny ka hoterenao amin’izay fomba fanoratany.
Moa tadidinao tamin’ireny fotoana mavaivay nanenjehan’ny mpitondra anao ireny, iza ny orinasa fanaovan-gazety nitarainanao… Aza manao ririnin-dasa tsy tsaroana fa…Dia hanao inona anefa ianareo eh ! Misotroa ronona…
Aza miantso mpanao gazety intsony amin’ny manaraka fa tadiavo izay fomba hamoahanao ny hevitrao ry jeneraly Fidy.